बैंककमा HGH अनलाइन फार्मेसीबाट HGH को अन्तर्राष्ट्रिय डेलिभरी - HGH बैंकक
बैंककमा HGH अनलाइन फार्मेसीबाट HGH को अन्तर्राष्ट्रिय डेलिभरी
बै Bang्ककमा हाम्रो HGH अनलाइन फार्मेसीले युपीएस प्रीमियम पोस्टल सेवा मार्फत विश्वका सबै देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय डेलिभरी प्रदान गर्दछ, २- 2-3 दिन लाग्छ। हामी अष्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, ब्रिटेन, रूस, यूरोप, एशिया र अन्य देशहरूमा पुर्‍याउने ग्यारेन्टी गर्दछौं। To
मध्य पूर्वी देशों सहित, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात।
हामी कसरी डिलीवरी प्रदान गर्दछौं?
एक ग्राहक पूरा गरे पछि र हाम्रो आदेश मा हाम्रो वेबसाइट मा भुक्तान गरे (जस्तै तारद्वारा हस्तान्तरण) हामी आफ्नो देशमा पठाउन विकास हार्मोन तयार गर्दैछौं, विशेष प्याकेजमा वृद्धि हार्मोन राखिएको ठण्ड भित्र, जसले सबै ढुवानी प्रक्रियामा राम्रो भण्डारण अवस्था सुनिश्चित गर्दछ। त्यसपछि हामी कूरियर सेवा यूपीएसलाई कल गर्दछौँ, कूरियरले आवश्यक नम्बरहरू ट्र्याकिङ नम्बर तयार गर्दछ।
तपाईंको अर्डर, उदाहरणका लागि V022 6083 XXX।
तपाईंको अर्डर डेलिभरी सेवामा पठाउनु भन्दा पहिले हामी यूपीएसबाट पठाइएको समय अपडेट गर्दछौं। त्यसो भए यो तपाईंको पार्सल अर्डरको लागि स्टकमा सकेसम्म थोरै भण्डारण समयलाई कम गर्दछ। उदाहरणका लागि शनिबार बिहान यूपीएसले प्राप्त गरेको पार्सल, शनिबार राती छोड्नेछ र ग्राहकले यसलाई सोमबार ढोका ढोकै प्राप्त गर्दछ।
हामीले पार्सल पठाउनु भएपछि, तपाईंको अर्डरको ट्र्याकिङ नम्बर हामी तपाईंको इमेल ठेगानामा पठाइनेछौं।
तपाईंले ट्र्याकिङ नम्बरको साथ ट्र्याकिङ नम्बर V022 6083 XXX लाई प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाइँले अद्यावधिक गरिएको स्थान र तपाइँको पार्सलको अनलाइन मार्ग जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यो आधिकारिक वेबसाइटमा गर्न सकिन्छ।
तपाईंको ट्र्याकिङ नम्बर भर्नुहोस् र पार्सलको बारेमा कुनैपनि समयमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
के हामी ग्यास वा भट्टिमा कुनै पनि समस्या प्राप्त गर्न सक्दछौं?
धेरै ग्राहकहरूले पहिले अन्य वेबसाइटहरूमा विकास हार्मोनको आदेश दिए र तिनीहरूसँग खुसी थिएनन्। केही पार्सलहरू केवल सीमा शुल्कमा भत्किएको थियो र तिनीहरूले कहिल्यै सामानहरू कहिल्यै पाएनन्। हाम्रो पसोन्टको संरक्षकको ढोकामा डिलिवरीको गारंटी दिन्छ, हामीले विश्वभरका सबै देशहरूमा5वर्ष भन्दा अधिक HGH वृद्धि हार्मोन प्रदान गर्ने अनुभव छ।
हामी धेरै देशहरूमा परम्परागत निकायको विशेष कुरालाई सजग छौं। यदि आवश्यक छ भने, हामी कागजातसँगै र पार्सलमा रसीद थप्दछौं।
थर्मो प्याकेजिंग कलमको अतिरिक्त एक विशेष पेन्सिल केसमा पूर्व-व्यवस्था गरिएको छ जुन भन्सार निकासीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ र जफत रोक्दछ।
HGH का सबै अर्डरहरू एक विशेष प्याकेजि inमा प्याकिंग गर्दै छन् स्थिर तापमान राख्न, १२-१-12 डिग्री भन्दा बढि।
प्रयोगशाला परीक्षणहरूका अनुसार, छोटो नेतृत्व समय (डिलीवरी समय) सँग उत्पाद गुणलाई असर गर्दैन।
विकास हार्मोन वितरण गर्ने देशहरूको सूची:
यसमा दायर गरिएको: शिपिंग
अर्को लेखमा HGH को अन्तरराष्ट्रीय वितरण
जेसन थॉमसन - जुन 25, 2020
नमस्ते राम्रो लाग्दछ कि पाउन्ड स्टर्लिंगको विनिमय दर के हो धन्यवाद थुनकिआउ छिटो जेसनको सम्पर्कमा छु
जनवरी - नोभेम्बर 9, 2019
हामीसँग अनुभव छ र जर्मनीमा डेलिभरीको विशिष्टता छ, हामी सुरक्षित डेलिभरीको ग्यारेन्टी गर्छौं
वा हामी तपाईंको बैंक खातामा तपाईंको पैसा फिर्ता गर्नेछौं
क्लाऊस - नोभेम्बर 9, 2019
नमस्ते, म जर्मनीबाट
के तपाईं जर्मनीमा सुरक्षित वितरणको ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ?